नामी कलेजले नेपालमै विदेशी डिग्री दिन्छ, रोजगारीको समस्या छैन । – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/नामी कलेजले नेपालमै विदेशी डिग्री दिन्छ, रोजगारीको समस्या छैन ।
नामी कलेजले नेपालमै विदेशी डिग्री दिन्छ, रोजगारीको समस्या छैन ।
काठमाडौँ । नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा केही वर्ष अघि थपिएको नाम हो । ‘नयाँ आयाम मल्टी डिसिप्लिनरी इन्स्टिच्युट अर्थात् नामी ।’ पढाइका लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीलाई सुलभरूपमा विदेशी डिग्रीसहितको उच्च शिक्षा दिने उद्देश्यकाका साथ खुलेको नामीमा दश जोड दुईसहित स्नातक र स्नातकोत्तरसम्म पढाइ हुन्छ ।
गत शैक्षिक वर्षमा कक्षा ११ सुरु गरेको नामीमा बिएस्सी कम्युटिङसहित बिबिए, व्याचलर्स इन इन्भाइरोमेन्ट र स्नातकोत्तर तहमा एमबिए कक्षा सञ्चालनमा छन् । विद्यार्थीहरूको रोजाई बन्दै गएको ‘ए लेभल’ पनि अध्यापन हुन्छ ।
बेलायतको ‘युनिभर्सीटी अफ नर्थ ह्यामटन’ को सम्बन्धन रहेको नामीले उच्च शिक्षाका विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमै रोक्न सफल भएको सञ्चालकहरूको भनाइ छ । नामीले दिएको डिग्रीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ‘इक्वुभ्यालेन्ट’ गरेको छ । हामीले नामीका प्रिन्सिपल सञ्जीव उदाससँग कलेजको शैक्षिक गतिविधिबारे कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, प्रिन्सिपल उदाससँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
‘नयाँ आयाम मल्टी डिसिप्लीनरी इन्स्टिच्युट’ अर्थात् नामी कलेजमा कुन कुन विषयको पढाइ हुन्छ ?
अहिले हाम्रो कलेजमा ‘प्लस टु’ छ । होटल म्यानेजमेन्ट र विज्ञान विषयसहितको प्लस टु हो । ए लेभल पनि पढाउँछौँ । व्याचलर्स लेभलमा बिएसस्सी कम्युटिङ, बिबिए, इन्भाइरोमेन्ट साइन्स छ । मास्टर्समा एमबिए अध्यापन गराइरहेका छौँ । एमबिए चाहिँ युनिर्सिटी अफ अर्थ ह्यामटन बेलायतको सम्बन्धनबाट सञ्चालित छ ।
कोरोनाका कारण सबै शैक्षिक संस्थाहरूबन्द छन्, तपाईंहरूकसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ ?
लकडाउनअगाडि नै आन्तरिक परीक्षा सकिएको थियो । त्यसैले ‘प्लस टु’ लाई खासै फरक परेन । हाम्रा शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूका समूह बनाएर अभ्यास गराइरहनुभएको छ । युके डिग्री भएका कारण व्याचलर्स र एमबिएमा उतातिर परीक्षा लिखितभन्दा बढी ‘असाइनमेन्ट’, ‘प्रोजेक्ट बेस’ हुने गरेको छ ।
विद्यार्थी उपस्थित भएरै परीक्षा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कलेजमा छैन । युकेले नेपालमा परीक्षा नै लिनुपर्ने विषयलाई समेत प्रोजेक्ट, ‘एसाइनमेन्टमा कन्भर्ट’ गरिदिएको छ । विश्वविद्यालयले पनि आफ्नो प्लेटफर्म दिएको छ । त्यहाँ भिडियो कन्फरेन्समार्फत पढ्न पनि मिल्यो । कक्षाहरू यसरी सञ्चालन भइरहेका छन् । विद्यार्थीहरू घरमै बसेर प्राध्यापकहरूसँग नियमितरूपमा सम्पर्कमै रहने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।
अब नयाँ शैक्षिक वर्ष सुरु हुने समय आउनै लागेको छ, ए लेभलमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण कस्तो छ ?
ब्रिटिस काउन्सिलका माध्यमबाट हामीले ए लेभल सञ्चालन गरिरहेका छौँ । ए लेभलका परीक्षाहरू सबै परिवर्तन भइसकेका छन् । विश्वव्यापीरूपमा कोरोनाको महामारीका कारण परीक्षा लिनसक्ने अवस्था छैन । ब्रिटिस काउन्सिलले परीक्षाकै बारेमा फरक अवधारणा समेत ल्याइरहेको छ ।
प्लस टु को तुलनामा ए लेभल फरक प्रकृतिको पढाइ पनि हो । अध्ययन हुने विषयहरूउस्तै भए पनि बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले नै बनाएको विषेश कोर्स हो । प्लस टु चाहिँ पुरातनवादी जस्तो छ । ए लेभल फरक प्रकृतिको भएकाले यसमा विद्यार्थीको चासो धेरै छ ।
विद्यार्थीको आकर्षण पनि राम्रो छ । नेपालका राम्रा र उत्कृष्ट विद्यालयहरूबाट समेत ए लेभल पढ्न हाम्रो कलेजमा विद्यार्थीहरू आइरहेका छन् । ए लेभल पढ्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ विदेशी डिग्री लिन चाहने बढी देखिन्छन् ।
तपाईंहरूले सुरु गरेका प्लस टु र ए लेभल लगायतका कोर्स अध्ययन गर्न विद्यार्थीले तपाईंहरूकै कलेज किन रोज्ने ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको हाम्रो फ्याकल्टी हो । शैक्षिक क्षेत्रमा अनुभवी प्राध्यापकहरू नभए कामै छैन । नामी कलेजमा अहिले ११ कक्षा पढेर १२ मा जाने पहिलो ब्याचले पढिरहेको छ । अरू स्थापित कलेजहरूको तुलनामा हामीले गरेर देखाउनुपर्ने पनि छ । हामी प्लस टु मा नयाँ नै छौँ । हामीले कलेजको फ्याकल्टी पनि उत्कृष्ट चयन गरेर राखेका छौँ ।
प्लस टुमा पिएचडी गरेका प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, जुन अन्य प्लस टु सञ्चालन गरिरहेका कलेजहरूमा न्यून मात्रामा देखिने गरेको छ । हाम्रो कलेज ३७ रोपनी जग्गामा सञ्चालनमा छ । भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला, आवश्यक अन्य शैक्षिक गतिविधिका लागि उचित बन्दोबस्तर उत्कृष्ट फ्याकल्टीका कारण विद्यार्थी हाम्रो कलेजमा आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
ब्याचलर्समा चाहिँ के छ ?
ब्याचलर्समा हाम्रो ‘युके एफिलिएटिभ’ डिग्री भएका कारणले गर्दा मुख्य आकर्षण आइटीमै देखिन्छ । हाम्रो कलेजमा बिएस्सी कम्युटिङ पढाइ हुने गरेको छ । त्यसमा पनि ‘स्पेसलाइजेशन’ गरेर बिएस्सी इन सफ्टवेयर र बिएस्सी इन नेटवर्किङ गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । अहिलेको समय आइटीकै हो ।
अहिले लकडाउनको समयमा घरमै बसेर काम गर्नसक्ने क्षेत्र भनेको आइटी नै हो । क्षमता भयो भने नेपालमै बसेर विदेशको काम गर्न सकिने भएका कारण आइटीमा मुख्य आकर्षण छ । अर्को बिबिए हो । नेपालीको कोर्सकै पनि आकर्षण राम्रो छ, हाम्रो त बेलायती डिग्रीसहितको बिबिए भएका कारण आकर्षण छ । परम्परागत परीक्षा प्रणालीभन्दा ‘प्रोजेक्ट स्टडी’ । ‘प्रिजेन्टेसन’ मा बढी फोकस छ ।
अर्को, इन्भारोमेन्टल साइन्स पनि हाम्रो कलेजमा पढाइ हुने गरेको छ । यो नेपालमा थोरै कलेजमा मात्रै पढाइ हुने गरेको कोर्स हो । यसमा आइटी, बिबिएजस्तो विद्यार्थीको चाप हुँदैन तर यसमै करिअर बनाउँछु भनेर पढ्ने विद्यार्थीहरू छन् ।
‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ को सुविधा पनि होला कलेजमा, कस्तो छ अन्य सुविधा ?
हाम्रो कलेजमा ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ को सुविधा छ तर विद्यार्थीहरूमा ब्याचलर्स लेभलमा विदेश गएर पढ्नेभन्दा पनि नेपालमै पढौँ भन्ने भावना हुने गरेको छ । युकेमा यहाँभन्दा बढी शुल्क हुने भयो । डिग्रीमा नेपाल र युकेमा केही पनि फरक छैन । क्वालिटी उही हो । नेपालमा बेलायतमा भन्दा धेरै सस्तो शुल्कमा पढ्न पाइने भएका कारण ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ गर्ने विद्यार्थीको संख्या कम छ ।
पढ्न विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या ठूलो छ । नेपालमै विदेशीस्तरको शिक्षा दिइरहेका नामीजस्ता कलेजका कारण विद्यार्थी विदेशिने क्रम घटेको छ त ?
कलेजहरूमा हामी मात्रै होइनौँ । अरू पनि छन् । धेरै ठूलो संख्यामा रोक्न नसकेको भए पनि केही हदसम्म राम्रा विद्यार्थी हाम्रोजस्ता कलेजका कारण नेपालमै रोकिएका छन् । अहिले विदेशी डिग्री लिन विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन ।
लकडाउनकै कारण अष्ट्रेलियाका नेपाली विद्यार्थीलाई घर जाऊ भन्ने अवस्था आयो । युकेमै पनि यो शैक्षिक वर्षमा स्कूल–कलेजमै सशरीर उपस्थित भएर पढ्ने अवस्था नहुने जस्तो त्यहाँका विश्वविद्यालयहरूले भनिरहेका छन् ।
विदेशी विश्वविद्यालयको डिग्री नेपालमै पढ्ने वातावरणका लागि विदेशी विश्वविद्यालयले तोकेको स्तर हुनुपर्छ, त्यसै मिल्दैन । आइटी, वातावरण विज्ञान र व्यवस्थापन संकायतर्फ नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने कलेजहरू छन् । आइटीमा राम्रो गर्न विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन । नेपालमै बसेर विदेशको काम गर्न सक्ने अवस्था छ ।
नामी कलेजबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरूको रोजगारी वा स्वरोजगारीको अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो कलेजबाट अहिलेसम्म बजारमा गइसकेको झण्डै ९० प्रतिशत विद्यार्थीले पास आउट हुनासाथै रोजगारी पाएका छन् । धेरैजसो कोर्समा तेस्रो वर्षको पढाइकै क्रममा इन्टर्न गर्नुपर्ने पर्छ । इन्टरर्नसिपमा पनि प्रोजेक्ट बनाएर व्यवस्थित तरिकाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कम्पनीमा इन्टरर्नसिप गर्न गएका हुन्छन्, त्यही रोजगारी पाउने गरेका छन् ।
कति विद्यार्थीले त आफैँ आइटी कम्पनी सञ्चालन गरेका छन् । आइटी भनेको कम पूँजीमा पनि कम्पनी सुरु गर्न सकिने क्षेत्र हो । कामको खोजीमा विद्यार्थीलाई समस्या हुने अवस्था छैन । हाम्रो कलेज आफैँले समेत इन्फोडेभलपरजस्ता नेपालका ठूला आइटी कम्पनीसँग सहकार्य गरेको छ । त्यसमा इन्टर्न पठाउने गरिएको छ ।
युके डिग्री नेपालमा पढाएको फाइदा के छ भने, समर भ्याकेसन तीन–चार महिनाको दिने गरेको छ । त्यो विदामा बजारमा चलेका अन्य प्रविधिका बारेमा समेत अध्ययन गर्ने समय मिल्छ । यसबाट विद्यार्थीले आफ्नो क्षमता बढाउन सक्छ ।
अन्त्यमा शुल्कको कुरा गरौँ, समग्रमा शुल्कको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले नेपालमै समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै कतिपय कोर्स महँगो देखिन्छ । त्यसको तुलनामा नामीमा धेरै कम छ । ‘बिएस्सी कम्युटिङ’ को शुल्क समेत नेपालका अन्य कलेजको तुलनामा सस्तो छ । ‘बिएस्सी कम्युटिङ’ मा झण्डै १० लाख रुपैयाँमा सबै कोर्स सकिने गरेको छ । यो भनेको विदेशी डिग्री हासिल गर्दा लाग्ने निकै कम शुल्क हो ।